I-Waterfront Villa 246E South Finger by Balute Services
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Camilla
KUBALULEKILE: Ngenxa ye-COVID-19, le ndawo inwetshiwe izindlela zokuhlanza nokubulala amagciwane kanye nezinqubo zokuqinisekisa ukuphepha kwezivakashi zethu.
Siqinisekiswe njenge-Covid ephephile ngaphansi kwemithetho kahulumeni wase-Antigua futhi sisebenzisa isifutho se-Electrostatic ukuze sibulale amagciwane endaweni eyi-100% ngaphambi kokufika kuso sonke isivakashi.
Le villa enamakamelo amabili engaphambili emanzini iyikhaya leholide elitholakala kahle lapho ungajabulela khona ukuba imizuzu ukusuka ogwini ngenkathi ujabulela ukunethezeka okuphelele.
Isitezi esiphansi sithokozela ukuhlala okuvulekile nekhishi elisha sha nendawo ebanzi, egcwele ukukhanya nendawo yokudlela ene-AC ne-wifi kuyo yonke impahla. Le ndawo yokuhlala evulekile iphumela ethaleni elikhulu eliyimfihlo elimboziwe okuyindawo ekahle yokubuka izikebhe zidlula ekuseni nekhofi, noma abanikazi belanga abalalele imisindo yakusihlwa yasezindaweni ezishisayo. Amakamelo okulala ayindawo epholile futhi enethezekile anamagumbi okugeza ayi-en suite nezikhwama zendawo yokugcina.
I-villa isilungiswe ngokuphelele ngesitayela sesimanje nesihlanzekile futhi ilungele imibhangqwana noma imindeni efuna ikhaya elinakho konke edinga iholide elihle lolwandle.
Itholakala emphakathini othule futhi ophephile wase-Jolly Harbour, le villa ihamba imizuzu emihlanu ukusuka kwelinye lamabhishi angcono kakhulu e-Antigua futhi imizuzu embalwa nje ukuya esitolo esikhulu nezindawo zokudlela. Ibanga elifushane ukuya phansi ogwini amanye amabhishi amangalisa kakhulu e-Caribbean alinde ukubhekwa
Lapho ufika e-villa yakho, elinye lethimba lethu lizoba khona ukuze likubingelele futhi likuhlalise - futhi lizobe likhona kulo lonke iholide lakho ukuze likusize noma ukweluleka lapho kudingeka.
UCamilla Ungumbungazi ovelele